La Villa LaLa - I-Airbnb
Ifakwe phakathi kwezona ndawo zintsha kunye nenkulumbuso yophuhliso lwezindlu eSemarang, uya kuhlala kwindawo ekhululekileyo necocekileyo yestudiyo yabucala, nayo yonke into oyifunayo ukuze uzive usekhaya.
Ibekwe kanye ngaphakathi entliziyweni yeSemarang; Ukuhamba nje okufutshane ukusuka kwiindawo zembali ezinje ngeLawang Sewu kunye neTugu Muda, kunye nemizuzu nje kude nokutya okudumileyo kunye namaziko okuthenga anje ngeSimpang Lima kunye neParagon Mall.
Indlu yesitudiyo yi-30m^2, enebhedi enye ephindwe kabini kunye nebhedi enye, ukuba ikhaphe usapho lwakho lonke ngokukhululekileyo. Igumbi likwaxhotyiswe ngefriji ukugcina ukutya kwakho kukutsha kunye neziselo zakho zipholile! Ukongeza, ukhuseleko lweeyure ezingama-24 luqinisekisa ukuba wena kunye nempahla yakho nikhuselekile kwaye niphilile.
Indawo ephithizelayo, unokufumana izinto ezininzi eziyimfuneko kufutshane. Ivenkile eluncedo (Indomaret, AlphaMart) kunye nevenkile yokutya ekhethekileyo iphambi kwepropathi, kunye neMcDonald's, ibhloko esekhohlo.
Zive ukhululekile ukunxibelelana nam ukuba ufuna naluphi na uncedo ekwenzeni uninzi lohambo lwakho oluya eSemarang. Ndiyavuya ukunceda!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Semarang Tengah